विश्वव्याधिसँग खेलाँची- विचार - कान्तिपुर समाचार
आफ्नै स्याहार खोजिबसेको सरकार जनतालाई उनीहरुकै हालमा अलपत्र छाडिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ
वैशाख ८, २०७७ युग पाठक
त्यसो त धेरैजसो गरिब मुलुक आजको मितिसम्म यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको विश्वव्याधि–सूचीले देखाउँछ । केही हप्ताअघिसम्म इटाली, स्पेन र अमेरिका पनि यस्तै दाबी गर्दै थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त छुमन्तरमा यो भाइरस अमेरिकाबाट गायब हुने भाषण गर्दै हिँड्थे । हिजोआज उनको ओठमुख सुकेको छ । गोरा जातिका मान्छेलाई कोरोनाले छुँदैन भनेजस्तै अफ्रिकी–अमेरिकी समुदायलाई लाग्दैन भन्ने पनि भ्रम थियो । अहिले यो भाइरसबाट मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश अफ्रिकी–अमेरिकी नै परेको आँकडा देखिएको छ ।
इबोला भाइरसबारे भएका अध्ययनले के देखाएका छन् भने, कुनै भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्नासाथ प्रभावशाली भैहाल्दैन । जब त्यो कुनै एउटा मानव शरीरमा ‘म्युटेट’ हुन्छ, त्यसपछि मात्र खतरनाक रूप धारण गरेर मानिसहरूमा फैलिन थाल्छ । इबोला भाइरसले अफ्रिकामा जुन ध्वंसात्मक रूप देखायो, त्यो अरू महादेशमा त्यसै गरी फैलिन पाएन ।
वैज्ञानिकहरूले फरक जिन संरचना, भिन्न रोगप्रतिरोधात्मक पद्धति लगायतले पनि कुनै भाइरसको प्रकोप कुन समुदायमा फैलिन्छ र कहाँ सीमित हुन पुग्छ भनी निर्णय गर्न सक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ । कुनै भाइरसको शक्ति र संरचना कस्तो छ भन्ने वैज्ञानिक निर्क्योल एकातिर हुन्छ भने, अर्कातिर भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका विशेषताले पनि समुदायहरूमा त्यसको प्रभाव फरकफरक देखिन सक्छ ।
मानौं अहिले विश्वव्याधिका रूपमा प्रभावशाली भैरहेको कोभिड–१९ फरक समुदायमा पुग्दा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ भैरहेको रहेछ भने कुनै एक खालको वैज्ञानिक निष्कर्ष र त्यहीअनुसारको उपचार वा त्यससँग लड्न गरिने व्यवहार पद्धतिले सबैतिर प्रभावकारी काम गर्ला ? विज्ञानलाई पनि अर्को अन्धविश्वासका रूपमा आत्मसात् गर्न मिल्दैन । सियरा लियोनको फ्रिटाउन सहरको कुनै एक व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुन सफल इबोला भाइरसले अफ्रिकाका धेरै ठाउँमा ध्वंसात्मक रूप लियो ।
चीनको वुहानमा एउटा रूपमा ‘म्युटेट’ भएको कोभिड–१९ इटालीको कुनै व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुँदा फरक स्वरूपमा विकास भएन भन्न सकिने ठाउँ छ ? त्यही भाइरस केही मानिसको शरीरमा हवाइजहाज चढेर नेपाल आयो ; त्यसको प्रभाव नेपालमा आजसम्म कम देखिएको छ । तर यहाँ कुनै व्यक्तिमा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ हुन सफल भयो भने त्यसले विध्वंस नमच्चाउला भन्न सकिएला ?
यो विश्वव्याधिको चेतावनी व्यापक र टड्कारो छ । तर तीन हप्ता लकडाउन भैसक्न लाग्दा पनि नेपालको तयारी भने शून्यबराबर छ । मार्च ११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस महामारीलाई विश्वव्याधि (पेन्डेमिक) घोषणा गर्‍यो । त्यसअघि जनवरी ३० मै यसलाई विश्वमा फैलन सक्ने महामारी घोषित गरिसकिएको थियो ।
पहिलोपटक ‘आउटब्रेक’ भएको चीनको छिमेकी हुनुको नाताले पनि नेपालले आफ्नो तयारी उति बेलै सुरु गर्नुपर्थ्यो । त्यति बेलादेखि आजसम्म कुनै एनजीओले झैं हात धुने उर्दी जारी गर्नुबाहेक ओली सरकारले कुनै तदारुकता देखाइरहेको छैन । मलमलको तकिया सिरान हालेर फाइँफुट्टी गरेकै भरमा विश्वव्याधिको चुनौती सामना गर्ने सरकारको मूर्खतालाई सयमा सय नम्बर दिए पनि कम हुन्छ ।
शक्तिशाली मुलुकका अस्पताल भरिभराउ हुँदा हाम्रा अस्पताल सुनसान छन् । विश्वव्याधिको दृष्टिबाट हेर्दा यो राम्रो लक्षण हो । तर कोरोनाकै चपेटामा अरू बिरामीले सामान्य उपचारसम्म नपाएर मर्नुपरिरहेको तथ्य उत्तिकै भयावह छ । तथ्यांकमा नअटाउने कैयौं दीर्घरोगी घरमै मरिरहेका छन्, जसको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद यो सरकारलाई छैन । खर्बौं रुपैयाँको कर छुट दिएर राज्यले सघाएका निजी अस्पतालहरूको व्यवहार संकटमा झनै गैरजिम्मेवार र धूर्त देखियो । एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको बिरामीलाई खोकेकै बहानामा अपरेसन थिएटरबाट निकालेर अन्तै ‘रिफर’ गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार काम अस्पतालहरूले गरिरहेका छन् ।
पीपीई, टेस्ट उपकरण इत्यादिको व्यवस्था गरेर काममा जुट्नुपर्ने बेला ढोका बन्द गरेर बस्न अस्पतालहरूलाई कसले अनुमति दिइरहेको छ ? हिजोसम्म टेकु अस्पतालजस्ता सार्वजनिक अस्पतालको मूल्य नजोगाईकन निजी अस्पतालहरू नै उत्कृष्ट हुन् भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश यही राज्यव्यवस्थाले दिइरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलगायत अरू शक्तिशाली नेता र धनाढ्यहरू विदेशी अस्पताल धाउँथे । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको चीरहरण गर्ने त्यस्ता गतिविधि आज लज्जाको विषय बन्ने कि नबन्ने ? कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए आज उनीहरूलाई कुन सिंगापुरले रातो कार्पेट ओछ्याउला ? स्वास्थ्यसेवाको चरम निजीकरण गरेर उपचारै गर्न नसक्ने गरी गरिबलाई झन् गरिब बनाइदिने र अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्ने राजनीति कसले गरेको हो ?
एकातिर हाम्रो स्वास्थ्यसेवा पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । १ हजार मात्र संक्रमित अस्पताल पुग्ने अवस्था बन्यो भने हाहाकार हुनेवाला छ । अर्कातिर, ओली सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । समय छँदै स्वास्थ्य संरचना र उपकरणहरू तयार पार्ने जाँगर नदेखाउनुको पछाडि कमिसनको तुच्छ लोभ त थिएन ? यो प्रश्नलाई एउटा निम्छरो सम्बोधनले खारेज गर्न सकेन र सक्दैन ।
लकडाउन लगाएर शंकास्पद पृष्ठभूमिको कम्पनीलाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न रातारात सम्झौता गर्ने, ल्याइएको सामान नै डुप्लिकेट परेको स्विकार्दै आफैं त्यो सम्झौता खारेज गर्ने र इमर्जेन्सी मेडिकल उपकरण ल्याउन ढिलो गरिरहने नियत खतरनाक छ । कट्मेरो दम्भ प्रदर्शन गरेकै भरमा विश्वव्याधि सामना गर्न आजसम्म ढिला गरिरहनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड हो ।
लकडाउन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बिरामी बिस्तराबाट नक्कली फुर्ती देखाउन पनि प्रकट भएनन् ।
फगत लकडाउनको आदेश दिएर सरकार खोपीभित्र पस्यो र हरायो । यथार्थतः अहिलेसम्म खोपीभित्रै गायब छ । भाइरसले भन्दा पहिला भोकले लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता भएका श्रमजीवी र मजदुर वर्गको कानमा कुनै आर्थिक वा अरू सहयोगको प्याकेज परेन ।
सयौंको संख्यामा उनीहरू हिँडेर मोफसलका आफ्ना गाउँ/कस्बातिर फर्किए ; ती पैतालामा उठेका फोका सरकारको ‘नोटिस’ मा सम्म आएनन् । किसानका दूध, तरकारी, फलफूल खेर गैरहेका छन् ; आधारभूत सामग्रीको ‘सप्लाई चेन’ समेत खलबलिएको छ, तर जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै योजना सार्वजनिक भएको छैन ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आज पनि उसै गरी भाषण छम्केर काम चलाउन खोजिरहेछन् । तर, स्थानीय सरकारको महत्त्व यो संकटमा प्रमाणित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । गरिब परिवारलाई राहत बाँड्ने, घरघर साबुन र मास्क बाँड्ने, कोभिड–१९ बारे सचेतनामूलक पर्चा छापेर बाँड्ने मात्र होइन, हिँडेर घर फर्किएका मानिसलाई बाटामा खाना, बसोबासको व्यवस्था गर्नेसम्मका काममा स्थानीय सरकारहरूको तदारुकता प्रशंसायोग्य छ ।
स्रोत–साधन सबै कब्जा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगू बनाउने र संघीयतालाई असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको ओली सरकार यति बेला आफैं पंगू साबित भएको छ । सिंहदरबारबाट राज्यस्रोतको दोहन गर्ने राज्यको अपराधी चरित्र जुन हदमा उजागर भैरहेको छ, त्यही हदमा संघीयताको महत्त्व पनि प्रस्टिएको छ ।
समाजशास्त्री इमानुयल वालरस्टेनले भूमण्डलीकरणको आजको जमानालाई पुँजीवादी विश्वव्यवस्था भनेका छन् । नेपाल पनि पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको एक हिस्सा हुनुपर्ने हो, तर यहाँको कार्यप्रणालीलाई केलाएर हेर्दा नेपाल पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको हिस्सा होइन, यसको एउटा उपग्रह हो, उपभोक्ता हो । हामीसँग एउटा लाचार र आसे सरकार छ । त्यसैले ऊ पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको आदेश पर्खिरहेको छ । दुःख के भने, यो विश्वव्यवस्थाको नाभिकेन्द्रमै विश्वव्याधिले कठोर आक्रमण गरिरहेको छ । भूकम्पका बेलाझैं उद्धारका लागि कोही आइपुग्ने सम्भावना छैन । त्यसबाहेक शताब्दीकै भयावह आर्थिक संकटको संघारमा विश्व खडा भएको आकलन गरिसकिएको छ ।
एउटा भाइरसले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको भ्वाङ छ्याङछ्याङ्ती देखाइदियो । यसैको उपग्रह नेपालमा खडा गरिएको तासको घरजस्तो अर्थतन्त्रमा पनि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । यो मुलुकले पनि विभिन्न संकट नझेलेको होइन । विश्वयुद्धहरूको संकट धान्न कम से कम निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र थियो ।
राज्यको कहिल्यै भर नपरेका हाम्रा गाउँघरमा कुटोकोदालो गरेर आफूलाई धान्ने क्षमता थियो । अन्धाधुन्ध नक्कल गरिएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले त्यही निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई पनि ध्वस्त पार्‍यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसैको परिणामस्वरूप कृषि, घरेलु उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रहरू मूर्च्छित अवस्थामा छन् ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने, विश्वव्याधिले संकट गहिरिन थालेपछि मुख्य रोजगारदाता खाडी मुलुकहरूले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान भनिसकेका छन् । तर हामीसँग चीरहरण गरिएको अवस्थामा कृषिलगायत समाजको अर्थतन्त्र निर्वाह गर्ने परम्परागत ज्ञान, सीप र शिल्प छ । उत्पादन र वितरणको चक्र चलाउनै नसक्ने गरी हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र निस्लोट छ । ३५–४० लाख युवाहरू फर्किने अवस्था हुनासाथ उत्पन्न हुने परिस्थिति कसरी नियन्त्रणमा रहला ? एक त निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको सोस्ने क्षमता खत्तम हुनु, अर्कातिर राज्यव्यवस्थाले नै कृषिलगायत परम्परागत कामप्रति वितृष्णा भरिदिएको स्थितिमा घर फर्कने युवाले जीवनको लय भेट्टाउलान् कसरी ?
तर लकडाउन लम्बिने स्थितिमा निम्तिने अभाव, बेरोजगारी, वैराग आदिसँग लड्ने कुनै योजना बनाउन राज्यले तदारुकता देखाएकै छैन ।
वर्तमानको कर्मले भविष्यको रेखांकन गर्छ । हाम्रो वर्तमान लकडाउन छ । ओली सरकार फगत लकडाउनको आदेश जारी गर्न बिछ्यौनाबाट उठ्छ र फेरि सुत्छ । आफ्नै स्याहार खोजिबसेको सरकार जनतालाई उनीहरूकै हालमा अलपत्र छाडिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले लकडाउन सकिएपछि वा विश्वव्याधि नियन्त्रणमा आएपछि हाम्रो भविष्य के हुने भन्ने आकलन हामीसँग छैन । यसै अनुमान गर्न सकिने कुरा के भने, हामी अभूतपूर्व राजनीतिक संकट, सामाजिक विग्रह र धराशायी अर्थतन्त्रको खरानीमाथि उभिएका हुनेछौं ।
विश्वव्याधि पारिको भविष्यलाई सकेसम्म आफ्नो योजनाको परिधिभित्र राख्न अहिल्यै खाका कोरेर काममा जुट्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत–साधन राज्यमा केन्द्रित हुने व्यवस्थामा यो काम राज्यबाहेक अर्कोले गर्न सक्दैन ।
दान, उपकार, दया वा परोपकारले भविष्यको दृश्य रच्न सकिन्न । समाजको अर्गानिक जरा उखेलेर कर्पोरेट दुनियाँको कृत्रिम कारखानामा काम गरिरहेका मान्छे जुनसुकै दिन सडकमा फालिन सक्ने रहेछन् भन्ने तथ्य इतिहासमा योभन्दा भयानक तरिकाले कहिल्यै सत्य साबित भएको थिएन ।
अहिले आँखैअघिल्तिर महँगा गाडी र आइफोन बोकेका मानिसहरू एक छाक खानाका लागि घण्टौं लाइनमा बसेको दृश्य विश्वपुँजीवादको केन्द्र अमेरिकामै देखिनु संयोग मात्र होइन । हामीसँग त आजसम्म हेला गरिएको किसानको शरणमा आजको आजै जानुको विकल्प छैन ।
संघीयताको प्राणहरण गर्न हिजोसम्म कन्दनी कसेर लागेको सरकारले पनि अब टक्क अडिएर सोच्ने बेला भयो । संघीयतालाई तीन वर्षमा संस्थागत गरिसकिएको हुन्थ्यो भने आज धेरै व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । संक्रमित वा संक्रमित खोज्न अन्योलमा भौंतारिनु पर्दैनथ्यो । प्रदेशले ठूला व्यवस्थापन र स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, राहत वितरण, कन्ट्याक ट्रेसिङ लगायतका व्यवस्थापन मज्जाले गर्न सक्थे ।
भ्रष्टाचारलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको जब्बर संस्कृति नबनाएको भए स्थानीय तहको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता पनि उल्लेख्य हुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई बजारको नाफातन्त्रबाट बाहिर निकाल्न इमानदार प्रयत्न गरेको भए आजको डरलाग्दो स्थिति बन्ने थिएन । जनताका हातखुट्टा, मुटु, कलेजो, मिर्गौला र दिमाग बिक्रीमा राखेर कुनै समाजले उन्नति गर्न सक्दैन । अबको कोसिस यता हुनैपर्छ । सरकार खेलाँची गरिरहन्छ भने जनताले पहल लिनैपर्छ ।
यो विश्वव्याधिले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थामा पक्कै संकट ल्याएको छ । तर, यसको विकल्पमा संसारलाई नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा डोर्‍याउन सक्ने कुनै विश्वशक्ति वा राजनीतिक दर्शन यतिखेर प्रबल छैन । त्यसैले केही विद्वान्ले अनुमान गरेजस्तो विश्वव्यवस्था यो विश्वव्याधिपछि पनि बदलिनेछैन ।
करोडौं जनतालाई सडकमा छाडेर पुँजीपतिहरू फेरि यो व्यवस्थाको इन्जिन चलाउन लाग्नेछन् । तैपनि, विश्व उस्तै रहनेछैन ; चिन्तन प्रणाली र दैनिक जीवन उस्तै रहनेछैनन् । सरकारको चरम उदासीनताका बीचमा पनि नेपालका जनताले आफूलाई बदल्ने एउटा इमानदार प्रयासचाहिँ थाल्नैपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ ०७:५५
चैत्र २१, २०७६ युग पाठक
काठमाडौँ — कोरोना महामारीले सबैको दिमाग कब्जा गरेको छ । त्रास आफैंमा चहकिलो हुन्छ तर सबै ध्यान यसले खिँचेर राखिदिन्छ । मुलुक लकडाउनमा छ, हामी सबै घरभित्र बस्न बाध्य छौं ।
कामधन्दा, व्यवसाय सबै बन्द छ । महामारीको भूमरीमा नफँसिसकेको हुनाले भ्रमै सही एकप्रकारले नेपाली जनता आश्वस्त पनि देखिन्छन् ।
महामारीसँग जुध्ने सरकारी तयारी फितलो छ, त्यसमाथि हतारहतार ल्याइएको मेडिकल सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार भएको नमिठो खबर शीर्षस्थानमा छ । त्यसैले आशंका र त्रास दुवै मन्दमन्द हावामा मिसिएर सबैको वरिपरी घुमिरहेकै छ । तैपनि लकडाउनमा घर बस्दा मन शान्त राख्ने र बाध्यताबस् भौतिक दूरी बनाउन परे पनि सामाजिक बन्धन अझै मजबुत बनाएर एकअर्काको सहायताका लागि तयार रहनु छ ।
म पनि घरमै छु । पेशा, रुचि जे भने पनि अध्ययन, चिन्तन, लेखन र सामाजिक अभियानमा म संलग्न छु । त्यसैले मेरो लागि स्वतस्फूर्त लकडाउन नयाँ कुरा होइन । अहिलेको लकडाउन पक्कै त्यस्तो छैन । तैपनि यो समयमा पनि संसारले भोगिरहेको संकटका विभिन्न आयामको अध्ययन, चिन्तन, मनन र लेखनबाट मेरो लय भंग भएको छैन । खासमा चापाचाप काम छ । अरु पेशा, व्यवसाय भएका महानुभावहरुका निम्ति लकडाउन पक्कै सकसको विषय हो । तर मेरो कामको प्रकृति नै यस्तो छ कि यो घरै बस्नुपरेर रोकिँदैन ।
घरैमा बस्नुपरेको र नियमित कामको गति रोकिएको समयका लागि पुस्तक पढ्नु, सिनेमा हेर्नु, गीत सुन्नु असाध्यै राम्रा उपाय हुन् । त्यसबाहेक आफ्नो वरपर कोही खानै नपाउने वा आधारभूत आवश्यकताका सामग्री आपुर्ति नभएर संकटमा छ कि ख्याल गर्नुहोला । त्यस्तो संकट पार लाउन सामूहिक पहल आवश्यक छ । मलाई परेको छैन भनेर वास्ता गर्नुभएन भने बिस्तारै सामाजिक असन्तुलन पैदा भयो भने त्यो संकटले तपाईंलाई पनि छाड्ने छैन ।
अब म पाँच किताबहरु तपाईंलाई सुझाउँछु जो यो फुर्सदका लागि उपयोगी हुनसक्छन् । त्यसो त जरुरी महत्वका थुप्रै पुस्तक छन्, तर यहाँ औंलामा गनेर छान्नुपर्ने बाध्यताको पालन गरिएको छ ।
आफ्नै आँखाको लयमा (खगेन्द्र संग्रौला)
मेरो लेखक व्यक्तित्व खगेन्द्र संग्रौलालाई पढ्दै हुर्किएको हो । उनको उपन्यास 'जुनकिरीको संगीत' रातभरी नसुतेर पढेको सम्झना बिल्कुल ताजा छ अझै पनि । विभिन्न पत्रिकाका लेख पढेर र एक दशकदेखि व्यक्तिगत संगतमै पुगेर एक्टिभिस्ट हुन सिकियो । उनको भाषाशैली सर्लक्कै छुट्टिन्छ, तोरीको घानमा मकैको गेडो जस्तो । पूर्वेली झर्रो भाषामा संस्कृतका शब्दहरुको मिठो मिश्रण । अखबारी लेखन र निबन्धमा संग्रौला आफैंमा सांस्कृतिक इतिहासका एक नजिर हुन् ।'आफ्नै आँखाको लयमा' उनको माइलस्टोन निबन्धसंग्रह हो भन्ने मेरो ठहर छ । कहिले खित्का छाडेर हाँस्दै, कहिले गम्भीर हुँदै पढ्नुस् । लिम्बुवानको सामाजिक इतिहासका झलक पनि यसमा पाइन्छ । आफ्नै बाले चढ्ने गरेको घोडा होस् या वामदेव पहाडी सरको कोर्रा, उनका निबन्धले लिम्बुवानको नलेखिएको इतिहासका केही झलक अवश्य भन्छ ।
ज्याज (टोनी मोरिसन)
अंग्रेजीमा डिग्री (स्नातकोत्तर) पढ्दाताका पहिलोपटक टोनी मोरिसनको नाम सुनेको र 'विलभेड' उपन्यास पढेको । अफ्रिकी अमेरिकी मूलकी यी लेखक आक्रामक वक्ता र एक्टिभिस्ट पनि थिइन् । मृत्युपछि उनको प्रशंसामा लेख लेख्ने केही मानिसहरुप्रति मलाई यसकारण दया लाग्छ कि उनीहरुले विभेदकारी अमेरिकी श्वेतसत्ताविरुद्ध छेडेको जेहाद उनीहरुले बुझेकै रहेनछन् । नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका पक्षमा लेख्नेबोल्नेहरुलाई सत्तोसराप गर्नेले कुन मसीले मोरिसनको प्रशंसा गर्नसक्छन् म बुझ्दिनँ । यत्ति बुझ्छु, उनले पाएको नोबल पुरस्कारप्रतिको चाकरीबाहेक त्यो केही होइन । मोरिसनको 'ज्याज' मलाई मन पर्ने उपन्यास हो ।
अमेरिकाको शास्त्रीय संगीत मानिने ज्याज अफ्रिकी अमेरिकी जनताकै आविस्कार थियो र सन् १९२०को दशकलाई अमेरिकी इतिहासमा ज्याज युग पनि भनिन्छ । अफ्रिकी अमेरिकी जनताको राजधानी ठानिने न्यूयोर्कको हार्लेममा उपन्यासका वर्णित घट्नाहरु घट्दा ज्याज संगीत गुञ्जायमान हुनेगर्थ्यो । आफूभन्दा निकै कम उमेरकी युवतीलाई उसले प्रेम गर्छ र प्रेमको त्यो अनुभूति निरन्तर कायम राख्न उसको हत्या गर्छ । ‘ऊ’ के हो र के होइन, त्यो सब उसकी पत्नी भायोलेटले तपाईंलाई कथाको पत्तापत्ता बन्दाकोबी झैं उप्काएर देखाउनेछिन् । दासप्रथाको कहरदेखि हार्लेमको चकाचौंधभित्र ज्याज संगीतको सुरतालमा जुन जीवन अफ्रिकी अमेरिकी जनताले बाँचे, त्यो ज्याजको धुनमा बगेर आएनछ भने मलाई भन्नुहोला ।
जंगलके दाबेदार (महाश्वेता देवी)
हिन्दी फिल्म 'हजार चौरासीकी मा' र 'रुदाली' सम्झिनुहुन्छ ? महाश्वेता देवीको उपन्यास 'हजार चौरासीकी मा' र कथा 'रुदाली' लाई नै फिल्म बनाइएको तथ्य पनि सम्झुँ यहाँनेर । बंगाली भाषाकी एक स्तम्भ हुन् महाश्वेता देवी । खासगरी आदिवासी समुदायको जीवनलाई साहित्यमा ल्याउने श्रेय उनलाई दिने गरिन्छ । जंगलका दाबेदार उनको त्यस्तै एउटा उपन्यास हो ।
महाश्वेताको लेखनमा म एकप्रकारको अनौठो बास्ना भेट्टाउँछु । चल्तीका विषयहरु सर्लक्कै छाडेर भारतका विविध समाजको जीवनभित्र डुबुल्की मार्ने र त्यहाँबाट अचम्मअचम्मका पात्र र जीवनशैली र भाषाको बान्की टिपेर निकाल्ने उनको खुबीको म फ्यान हुँ । 'जंगलके दाबेदार' बिलकुल यस्तै उपन्यास हो । भारतको बिहार क्षेत्रमा १९ शताब्दिको अन्ततिर अंग्रेज साम्राज्यको विरुद्ध आदिवासी विद्रोह भएको थियो र त्यसको नेतृत्व बीरसा मुण्डाले गरेका थिए । उपन्यास बीरसा मुण्डाको वरिपरी घुम्छ र विद्रोहको कथा भन्छ । इतिहासको यो पक्ष उपन्यासमा पढ्न पाउनु, त्यो पनि महाश्वेताका शब्दमा, गजब होइन त ?
द पास्ट एज प्रजेन्ट (रोमिला थापर)
मोदी शासनमा फरक विचार राख्ने पत्रकार, लेखक, विचारक, चिन्तकलगायत विद्यार्थीहरुलाई अर्बन नक्सल छाप लगाएर विभिन्न प्रकारले दमन गरिँदा रोमिला थापर पनि त्यो लिस्टमा परेकी थिइन् । इतिहासकार थापरका विचार नै मोदी शासनका निम्ति दुस्मन भए । अहिले कोरोनाले ढाकेर मात्र, नत्र अझै पनि यो दुस्मनी कायम छ । प्राचीन भारतीय इतिहासलाई वस्तुसंगत व्याख्या गरेर अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ क्षितिज उद्घाटन गर्ने थापर संसारभर प्रशंसित छिन् । उनको 'द पास्ट एज प्रेजेन्ट' शीर्षक पुस्तक पढ्न म तपाईंहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछु । कोरोना महामारीपछि संसार इतिहासको उपल्लो किनारमा उपस्थित हुनेछ, त्यतिबेलाका लागि हामीसँग वैचारिक, राजनीतिक लगायत सबै ज्ञानको अपुग छ ।
थापरको यो पुस्तकले भूतकाल अर्थात् इतिहासको बितेको खण्डलाई हामी जसरी बुझ्छौं त्यसले वर्तमान चिन्न सघाउँछ कि सघाउँदैन भनेर तपाईंलाई झक्झक्याउने छ । इतिहासको नाममा भूतकाल वास्तवमा हाम्रो वर्तमानमै बाँचिरहेको हुन्छ । जीनमा पूर्खा बाँचे जस्तै– स्वभाव, आदत, आनिबानी, संस्कार, रुचि आदिका रुपमा । यो पुस्तकले इतिहासको बारेमा वस्तुसंगत धारणा बनाउन मद्दत गर्छ । पृष्ठभूमिमा प्राचीन इतिहास नै छ (भनौं, महाभारतकाल, रामायणकाल, वैदिककाल, बौद्धकाल आदि) र इतिहासको भाष्य किन बनाइन्छ भन्नेमा बहसको चुरो छ । किताबको अन्तिम खण्डमा भारतवर्षमा महिलाको पहिचानको विकास र स्थितिबारे रोचक छलफल पनि पढ्न पाइन्छ ।
कर्नाली ब्लुज (बुद्धिसागर)
बुद्धिसागरको उपन्यास 'कर्नाली ब्लुज'को नाम त सुन्नुभएकै होला । पत्रकारितामा जम्न लागेका कवि बुद्धिसागरलाई यो उपन्यासले पूर्णकालीन लेखक बनाइदियो । हाम्रो पुस्ताको बीचबाट आएको यो एउटा प्रतिनिधि किताब हो । त्यसैले पनि म यो उपन्यास पढ्न सिफारिस गर्छु ।
अरुथोकको जस्तै साहित्यको पनि इतिहास हुन्छ । मलाईचाहिँ कुन मितिमा कसले के लेख्यो वा के उपाधि वा पद पायो भन्ने टाइपको इतिहासको भाष्यमा रुचि छैन ।
विभिन्न लेखकहरुले साहित्यको विरासत अघि बढाउँदा कस्ता मुद्दा, प्रवृत्ति, कथा, भाषाशैली र रंगढंग विकास भएछन्, त्यसले पढ्ने मानिसको मानसमा कस्तो छाप पारेछ भन्ने कुरा मेरो ऐतिहासिक विवेचनाका मूल विषय हुन् । त्यस हिसाबले 'कर्नाली ब्लुज'मा २०५०/६० को दशकको तन्नेरी पुस्ताको भाषाशैली, बोल्ने चल्ने स्टाइल, रुचिको कथा र त्यो बेलाको तन्नेरी जीवनको रंगढंग देख्न/पढ्न पाइन्छ । बाबुप्रति छोराको अनुराग धेरै छ भनेर उपन्यासका बारेमा चर्चा गरियो । त्यो अनुराग कुन रुपमा व्यक्ति भएको छ भन्ने थाहा पाउन पनि पढ्नु परेन त 'कर्नाली ब्लुज' ?
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ २०:३५